कोरोना भाइरसबिरुद्धको खोप अर्को हप्तादेखि प्रयोगका लागि अनुमोदित
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » कोरोना भाइरसबिरुद्धको खोप अर्को हप्तादेखि प्रयोगका लागि अनुमोदित
मिशेल रोबर्ट्स, स्वास्थ्य सम्पादक, बीबीसी । विश्वभरीका मानिसका लागि खुशीको खबर आएको छ । बेलायतले फाइजर र बायोटेकले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरससबिरुद्धको (खोप) भ्याक्सिन व्यापक प्रयोगका लागि अनुमोदन गरेको छ । बेलायत सबै जनताका लागि खोप प्रयोगको अनुमोदन गर्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ।
ब्रिटिश नियामक, एमएचआरए भन्छन्, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने कोभिड–१९ का बिरामी बिरूद्ध ९५ प्रतिशतसम्म संरक्षण प्रदान गर्ने ज्याब रोलआउटको लागि सुरक्षित छ। खोपहरू उच्च प्राथमिकता समूहहरूका व्यक्तिहरूको लागि अब आउने हप्तादेखि नै लगाउन सुरु गरिन्छ ।
बेलायतले चार करोड डोज अर्डर गरिसकेको छ । अहिले बेलायतलाई तत्काल एक करोड खोप उपलब्ध गराउँने उत्पादन कम्पनीको दावी छ । पहिलो खुराक जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई दिन पर्याप्त हुने र दोस्रो खुराकपनि केही दिनमा नै बेलायतलाई दिइनेछ ।
यो खोप वास्तविकतामा जानको लागि सब भन्दा छिटो खोप हो । साधारणतया एक दशकको अवधिमा उही विकासात्मक चरणहरू अनुसरण पुरा गर्नपनि १० महिना लाग्छ। यो खोपले ती सबै चरण पुरा गरेर आएको छ । जे होस् खोप सुरु हुने भएको छ । तर भनिएको छ मानिसहरू अझै सतर्क रहनु पर्छ र कोरोनाभाइरसका नियमहरु पछ्याउन भने छोड्नुहुन्न किनकी यो खोप विश्वभरी छिटो समयमा पुग्न सक्दैन विशेषज्ञहरु भनाई छ ।
यसको मतलब सामाजिक दूरी र अनुहारमा मास्कको साथ नछोड्न भनिएको हो । भाइरस हुन सक्ने मानिसहरूलाई परिक्षण गर्नु र तिनीहरूबाट टाढा बस्नु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो ।
यो खोपका बारेमा ?
यो एक नयाँ प्रकार खोप हो जुन एमआरएनए खोपको रुपमा बुझिन्छ । जसले महामारी कोरोना भाइरसबाट आनुवंशिक कोडको सानो अंश प्रयोग लिन्छ र शरीरलाई कोभिड १९ बिरुद्ध लडाई गर्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण गर्न सिकाउँछ। यसले गर्दा यो भारसले मानव शरीरमा स्थान जमाउन पाउँदैन ।
एक एमआरएनए खोप मानवमा पहिले कहिल्यै प्रयोगको लागि अनुमोदन गरिएको छैन, यद्यपि मानिसहरूले ती क्लिनिकल परीक्षणहरूमा प्राप्त गरेका छन्। तर अब यो खोप आम मानिसमापनि लगाइनेछ । यो खोप प्रयोगसँगै मानिस धेरै कुरासँग लड्न सक्ने दावी गरिएको छ । केकेमा फाइदा हुन्छ भन्ने अनुशन्धान पुरा भएको छैन । किनकी बैज्ञानिकहरु कोरोना बिरुद्धकै अनुशन्धानमा मात्र व्यस्त छन् ।
यसको खोप माइनस ७० डिग्री तापक्रममा आसपास भण्डार गरिएको हुनुपर्दछ र विशेष बक्सहरूमा त्यति चिसो दिने क्षमताका बरफमा राखिन्छ। एक पटक डेलिभर भएपछि, यो फ्रिजमा पाँच दिनसम्म राख्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । यसैले विश्वभरीका विकाशोन्मुख वा गरिब देशका दुरदराजमा पुर्याउँन नसकिने हो की भन्ने आशंका अझै छ ।
कसले पाउने छ र कहिले ?
विशेषज्ञहरूले एक उच्च प्राथमिक जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी तत्काल वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सुरुमा फ्रण्ट लाईनमा काम गरिरहेका व्यक्ति, उच्च हेरचाह गर्नुपर्ने व्यक्ति र हेरचाहमा खटिएका कर्मचारी त्यसपछि पछि ८० बर्ष भन्दा बढि उमेरका व्यक्ति र अन्य स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाहकर्मीहरूलाई दिइनेछ ।
तिनीहरूले खोपको पहिलो डोज प्राप्त गर्नेछन् । क्रिसमस भन्दा केही पहिलेदेखि नै यो वितरण सुरु हुन्छ । सन् २०२१ को सुरुवातमा नै खोप सबैलाई पुर्याईनेछ । यो दुई डोजमा इन्जेक्सनको रूपमा दिइन्छ । २१ दिनको फरकमा दोस्रो खुराक दिनुपर्ने हुन्छ ।
अरू कोभिड खोपहरू के हुन्छ ?
अहिले विश्वमा केहि अन्य आशाजनक खोपहरूपनि छन् । जुन चाँडै अनुमोदन हुन सक्छन् । मोड्रेनाले तयार गरेको खोपपनि फाइजर भ्याक्सिनकै जत्तिको समान छ भनिएको छ ।
यसले समान सुरक्षा प्रदान गर्दछ भनेर दावी गरिएको छ । बेलायतले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकाबाट बिभिन्न किसिमका कोभिड खोपहरुकोपनि अर्डर गरिसकेको छ। यसैले अरु खोपपनि चाँडै प्रयोगमा आउँने दावी गरिएको छ ।
रसियाले स्पट्निक भन्ने अर्को खोप प्रयोग गरिरहेको छ, र चिनियाँ सेनाले क्यान्सिनो बायोलजिकले बनाएको अर्को एउटालाई अनुमोदन गरेको छ। दुबैले अक्सफोर्ड खोपमा समान तरिकाले काम गर्दछन्। यसैले सन् २०२१ को सुरुवातदेखि खोपले व्यापकता पाउने निश्चित छ । धेरै कम्पनीका खोप आएपछि यसको सहुलियत मुल्यपनि पाइनेछ । बीबीसी